पाइन्ट पछाडी ‘पर्स’ बोक्दा मेरुदण्डमा कति असर गर्छ ? – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ मंसिर ७ गते शनिबार ११:३४ मा प्रकाशित
थुप्रैले पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स, बाक्लो रुमाल, कागजात आदि राख्ने गर्छन् । यसो गर्नेमा पुरुषहरू बढी छन् । तर, अधिकांशलाई यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे हेक्का छैन । पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राखेर बस्दा त्यसले मेरुदण्ड दुख्ने तथा नशा च्यापिने पनि निम्त्याउन सक्छ ।
१ः पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राखेर बस्दा एकातिरको भाग उठ्छ र अर्काेतिरको भाग तल जान्छ । यसले मेरुदण्डलाई बंग्याउन सक्छ । सिधा हुनुपर्ने वस्तु बांगीदा दुखाई त निम्तिन्छ नै ।
२ः सुरुमा मेरुदण्ड अस्थायी रूपमा बांगिन्छ । त्यसपछि स्थायी रूपमा बांगिन्छ । यो अवस्थालाई ‘स्कोलियोसिस’ भनिन्छ । यो समस्या १४–२० वर्षको उमेर समूहलाई बढि हुनेगरेको मैले देखेको छु । यस्ले पनि ठिक हुनै गाह्रो हुने खालको दुखाई निम्तिन सक्दछ ।
३ः वयस्कहरूमा पनि मेरुदण्ड बांगिने समस्या हुन्छ । एकातिर उठ्दा र अर्काेतिर तल पर्दा पेल्भिस (हिपको पूरै एरिया)लाई नै असर गर्छ । पूरै पेल्भिस तथा मेरुदण्डको एलाइण्मेन्ट बिग्रदा पनि मेरुदण्डको खतरनाक दुखाइ हुन सक्छ ।
४ः सिधा गरेर राख्नुपर्ने चिजलाई बांगो गर्दा केही न केही त असर त पर्छ नि ।मेरुदण्ड भनेको शरीर रुपी घरको पिलर हो । त्यसकारण मेरुदण्ड बांगिँदा यस्तो अवस्थामा मेरुदण्डका हड्डी रुपी पिलरलाई समात्ने लिगामेण्ट तथा मांसपेशीमा पनि नराम्रो असर पर्दछ जस्लेगर्दा दुखाई पैदा हुन्छ ।
५ः हाम्रो शरीरको हिप क्षेत्रमा साइटिक भन्ने शरीरको सबैभन्दा ठूलो नशा हुन्छ । पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा एकातिर मात्रै पर्स राख्दा यो नशामा दबाब पैदा हुन्छ । यो हरेक दिन दोहोरिइरहन्छ जस्ले गर्दा साइटिक नशामा एकदम नराम्रो असर पर्छ । यसले साइटिका जस्तो नसा च्यापिने लक्षण पनि ल्याउन सक्छ ।
६ः पर्सको ठ्याक्कै माथि हिपका बिभिन्न मांसपेशी हुन्छन् । यी मांसपेशीको बीचबाट साइटिक नशा गएको हुन्छ । पछाडी पर्स राख्दा निरन्तर दबाबले ती मांसपेशी सुन्निने वा इन्फ्लामेसनले ग्रस्त हुने हुन्छ जस्कारण यी मासु बिचबाट गएको साइटिक नशा च्यापिएर पनि साइटिकाका लक्षणहरु देखिन सक्छ ।
७ : नेपालमा मेरुदण्डको दुखाइ नभएको मान्छे भेटाउनै गाह्रो छ । पहिलै भएको दुखाईलाई पछाडी पर्स राख्ने बानीले झन् बढाउने गर्छ ।त्यसो भए पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्नु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त छैन ?
एकदमै ठीक छैन । पर्स मात्र होइन यहाँ बाक्लो रुमाल वा कागजात आदि राख्ने बानी पनि राम्रो होइन । यो नराम्रो बानी हो । यसले स्वास्थ्य समस्या निम्ताउने त छँदैछ
समस्या कति पुरानो भएको हो त्यसमा डिपेण्ड हुन्छ । एउटै एज गु्रपलाई एउटै समस्या छ भने पनि सन्चो हुन फरक समय लाग्न सक्छ । किनकि बिरामीको जीवनशैलीले पनि उपचार प्रभावित गर्छ । पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्न छाड्यौं भन्दैमा रोग सन्चो हुने होइन ।